(Dhageyso):- Arimaha Kismaayo Oo Cakiran iyo Musharixiin qaadacay Xildhibaannada Cusub ee Jubbaland. – hareerley News
Maxamed Ibraahim Shakuu oo ka mid ah musharixiinta isbeddel-doonka Jubbaland ayaa sheegay in iyaga mowqifkooda uu yahay mid cad ,isla markaana gebi ahaanba aysan aqoonsaneyn Shaqa kasta oo ay qabtaan Guddiga Madaxa bannaan ee xaduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland.
Hogaamiyaha Puntland oo Shir ka furay Magaalada Garoowe:-(Sawiro)
Posted on August 7, 2019 August 7, 2019 Author Hareerley News
Hogaamiyaha oo khudbad muhiim ah ka jeediyey Daahfurka Diyaarinta Qorshaha Horumarinta Puntland ayaa Wasaaradda Qorshaynta, Horumarinta dhaqaalaha iyo Iskaashiga caalamiga ah ku amaanay diyaarinta Qorshahani muhiim ka ah. “Puntland waxaa lagu amaani karaa mudadaa ay shaqayneysey horumarka ay ka gaartay inay nidaamkii dowladnimo dhisto, waxna ka qorshayso. Maanta waxaan halkan u joognaa daahfurkii 4-aad ee […]
Meydkii Marxuum En Yariisoow diyaaradii soo qaadi laheyd Oo Baaqatey sababta Oo la shaaciyey
Dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay sababta keentay in maanta ay baaqato Diyaaradii soo qaadi laheyd Meydka Gudoomiyihii gobolka Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. Guddiga qaban qaabadda ayaa sheegay in diyaaradda ay u baaqatay sababo dhanka Farsamada ah, islamarkaana maalinta berri ah la keeni doono. Guddoomiyaha guddiga qabanqaabada oo ah Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta Eng Cabdi […]
Ergeyga QM Ee Soomaliya James Swan Oo ugu baaqay Somalia iyo Somaliland in ay hal mid usoo jeestaan
Posted on November 24, 2019 November 24, 2019 Author Hareerley News
Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, James Swan oo khamiistii Khudbad ka jeedinayey golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ka hadlay wada-hadalada Soomaaliya iyo Somaliland. James Swan ayaa sidoo kale waxa uu khudbadaasi kaga hadlay doorashooyinka uu Madaxweyne Biixi u dalbaday muddo kordhina, isagoona xusay in Muqdisho iyo Hargeysa ay […]
Beydhabo Oo maanta ka furmayo shir looga hadli doono Isgaarsiinta